သင်၏ Google Analytics အတွက်အကောင်းဆုံးစစ်ထုတ်နိုင်သော Semalt ကျွမ်းကျင်သူ
၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခု၏အွန်လိုင်းရှိနေခြင်းသည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပိုင်ရှင်၏အဓိကပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခု သို့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်အသွားအလာ နှင့်ပတ်သက်သောလုပ်ဆောင်နိုင်သောဆုံးဖြတ်ချက်များသည်စံ Google Analytics ကဲ့သို့စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးကိရိယာများပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသော website traffic traffic ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဂူဂဲလ် Analytics မှမှားယွင်းသောစာရင်းများပြုလုပ်သော spam များကိုရည်ညွှန်းသည်။ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပိုင်ရှင်အများစုသည်သူတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များအားတိကျမှန်ကန်သောစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုမပြုလုပ်နိုင်ခြင်းမှာအံ့သြစရာဖြစ်သည်
သင့်လျော်သောနံပါတ်များကိုထုတ်လုပ်သောသင့်တော်သောစစ်ထုတ်စက်များသည်အမှန်တကယ်အသွားအလာကိုထင်ဟပ်ပြီး spam လွှဲပြောင်းမှုများမဟုတ်ပါက Google Analytics တွင်တန်ဖိုးရှိသောအချက်အလက်များကိုမှတ်ပုံတင်နိုင်သည်။
Semalt ၏ Customer Success Manager Ross Barber သည် Google Analytics ကို အသုံးပြု၍ လုပ်ဆောင်နိုင်သောစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်သင်ကြားပေးသည်။
ဂူဂဲလ် Analytics တွင်စစ်ထုတ်ခြင်းများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အကြိမ်ကြိမ်ငွေပေးချေမှုကိုမှတ်ပုံတင်သည့်ယန္တရားများကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းကဲ့သို့သောရွေးချယ်စရာများကိုသေချာစေသည်။ အချက်အလက်များ၏အလိုအလျောက်စစ်ထုတ်ခြင်းသည်စိတ်မချရ။ ဂူဂဲလ် Analytics console တွင်စီစစ်ထားသောစစ်ထုတ်မှုနှင့်မစစ်ထုတ်ထားသောရှုထောင့်တစ်မျိုးကိုအသုံးပြုရန်သေချာစေရန်၊ spam လွှဲပြောင်းခြင်းမှလုံခြုံမှုရှိစေရန်။ စစ်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၌အဘယ်အရာလိုအပ်သည်ကိုသုတေသနပြုရန်နှင့်နားလည်ရန်အရေးကြီးသည်။
၁။ Internal IP ကိုဖယ်ထုတ်ပါ
သင့် IP နှင့်ချန်လှပ်ထားရန်လိုအပ်သည့် IP address ကိုခြေရာခံရန်နှင့်ထည့်သွင်းရန်မသင့်သည့်အခြားမည်သည့်လိပ်စာမဆိုချန်လှပ်ထားပါ။
Exlude menu အောက်တွင် 'the Equal To' ကို 'IP address from traffic' ပေါ်တွင်ရွေးပါ။
သင်၏ IP နှင့်မည်သည့်နောက်ထပ်လိပ်စာမဆိုအိုင်ပီလိပ်စာ slot အောက်တွင်ထည့်ပါ။
spam လွှဲပြောင်းမှုများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော BOTS တွားသွားခြင်းနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်အတုများကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းအားအောက်ပါအဆင့်များဖြင့် Google Analytics မှမှတ်ပုံတင်ခြင်းမှလွတ်မြောက်နိုင်သည်။
စိတ်ကြိုက်အဖြစ် Filter အမျိုးအစားကိုယူပါ
Filter Field အောက်တွင် ISP အဖွဲ့အစည်းကိုနှိပ်ပါ
Filter ပုံစံအောက်တွင် - ^ (မိုက်ခရိုဆော့ကော်ပိုရေးရှင်း | inktomi ကော်ပိုရေးရှင်း | yahoo Inc | google Inc | stumbleupon inc ။ ) $ | Gomez
မကောင်းသောလူများကတိကျမှန်ကန်သောအချက်အလက်များကိုသတင်းပို့ရန် Google Analytics ရှိခြေရာခံကုဒ်များကိုခိုးယူရန် ၀ က်ဘ်ဆိုက်အရင်းအမြစ်ကိုခြေရာခံနိုင်သည်။ YourDomainHere ကို ၀ က်ဘ်ဆိုက်နာမည်ဖြင့်အစားထိုးခြင်းသည်လုံခြုံမှုရှိသည်။
filter အမျိုးအစား - စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်သည်
filter ပုံစံ - YourDomainHere \_ .com
အကယ်၍ site သည် (.ORG) ဖြစ်ပါက (.com) ကို (.org) ဖြင့်အစားထိုးရန်သတိရပါ။
၄။ Query Parameters အားလုံးကိုဖယ်ထုတ်ပါ
ဤအဆင့်မြင့်စစ်ထုတ်မှုသည်ဂူဂဲလ် Analytics တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့်စာမျက်နှာများကိုရှာဖွေရန်စာမျက်နှာတစ်ထောင့်မှကြည့်ရှုခြင်းသို့သွားသည်။ အဆင့်မြင့် filter အောက်တွင်:
Field A >> တောင်းဆိုရန် URL >> (။ *) \_?
Field B ကို >> အလွတ်ထား
ကွင်းဆင်း OUTPUT TO >> URL တောင်းဆိုရန် >> $ A1
၅။ URL တစ်ခုကို Hostname ထည့်ပါ
Customers အောက်ရှိ Advanced Filter ကိုအသုံးပြုပြီး Domain များစွာသည် sub-domains များသို့မဟုတ် sub-folders များမှတဆင့် Homepage ကိုထောက်ပံ့ပေးလျှင်အထူးသဖြင့် Domains များစွာမှအိမ်သို့ပြန်ပို့ခြင်း၏ရင်းမြစ်ကိုတိကျမှန်ကန်စွာခြေရာခံနိုင်ရန်အတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းကိုထူးခြားသော hostname သို့လွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။ Custom key ၏အဆင့်မြင့် filter များအောက်တွင် -
Field A >> Hostname >> (။ *
Field B >> URL ကိုတောင်းဆိုရန် >> (။ *)
Field Output to >> တောင်းခံရန် URL >> $ A1 $ B1
ဤရှားပါးသောစစ်ထုတ်မှုသည်စာလုံးအကြီးပေါ်ရှိ URL မှအစီရင်ခံစာများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်ထပ်တူရလဒ်များကိုရှောင်ရှားရန်အတွက်စာလုံးအသေးဖြင့်သာသတင်းပို့ရန်သေချာစေသည်။
Request URL အောက်ရှိစာလုံးအသေးကိုရွေးချယ်ပါ
7. အပြည့်အဝရည်ညွှန်း URL ကို
ဤစစ်ထုတ်မှုသည် Google Analytics တွင်ထင်ဟပ်သော spam လွှဲပြောင်းမှု၏အမည်အမှန်ကိုဖော်ထုတ်သည်။
Field A >> Hostname >> (။ *)
အကွက်မှထွက် >> အသုံးပြုသူသတ်မှတ်ထားသော >> $ A1
၈။ US Traffic Only
Google Analytics မှစစ်ထုတ်မှုများသည်နေရာဒေသအလိုက်စိတ်ကြိုက်အသွားအလာကိုရရှိနိုင်သည်။ သွား:
spam ရည်ညွှန်းချက်များကဲ့သို့သရဲရည်ညွှန်းမှုများသည် Google Analytics တွင်မှားယွင်းသောလမ်းကြောင်းကိုမှတ်ပုံတင်သည်။
Script - ကူးယူပါနှင့်ကူးယူပါက။ - အခမဲ့ - လူမှုရေးခလုတ်များ .com